Askari u diley labo kun oo shillin nin oday ah oo dacwadiisa Muqdisho ka bilaabatay - Jowhar Somali news Leader
Home News Askari u diley labo kun oo shillin nin oday ah oo dacwadiisa...
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwad loo haysto askari ka tirsan Ciidanka Booliska Soomaaliya oo Isgoyska Ceel-gaabta ee Muqdisho si bareer ugu dilay nin odey halkaas ku lahaa goob yar oo Ganacsi.
Nuur Daahir Geedi ayaa qirtay inuu dilay marxuumka lagu magacaabi jiray Cumar Xasan Macalin. Askarigan ayaa u dilay muran ka dhashay laba kun oo shilin Somaali ah oo Odeyga kaga iibsan lahaa Sigaar.
Askarigan loo haysto dilka qof rayid ah ayaa noqonaya kii labaad oo muddo toddobaad ah aymaxkamada ciidamada qalabka sida dhagaysato dacwadiisa,waxaana dhowr maalmood kahor maxkamadu ay dhagaysatay askari labo ruux ku diley magaalada Muqdisho.
Ciidamada dowlada oo isugu jira Boolis iyo Milatari ayaa ku kaca falal dil ah gudaha magaalada Muqdisho iyo agagaaaheda iyadoo xabsiga dhexe ay ku xiran yihiin askar xukun sugayaal ah iyo qaar kale oo dil lagu xukumay.